Structuring Web Documents miaraka amin'i Khachaturyan Nataliya, Semalt Expert
HTML dia mampiasa marika maromaro maromaro. Amin'izany, tokony hitadidy ianao fa ny isa ambony dia ny laharana ambony, ny maha-zava-dehibe azy. Ny lohatenin'ny lohan-dahatsoratra dia ilaina amin'ny dokam-barotra rehetra ary manampy amin'ny fananganana ny votoaty amin'ny fomba tsara kokoa. Amin'ny fampiasana ny lohateny dia afaka manavaka ny votoatinao ianao ary afaka mizara izany amin'ny sokajy samihafa. Zava-dehibe ihany koa ny lohateny ary manome lahatsoratra manintona kokoa sy manintona, ary ny andian-dahatsoratra amin'ny lohateny dia tokony ho sahy sy lehibe. Ny marika HTML H1-H6 dia nofaritana ho lohatenin'ny lahatsoratra na tranonkala hafa. Tokony hoeritreretinao fa ny loha-laharana voalohany izay manan-danja ho an'ny tahirin-tranonkala rehetra dia ny loha farany izay tsy dia manan-danja raha ampitahaina amin'ny marika famantarana hafa ao anaty tranonkala iray.
Khachaturyan Nataliya Semalt Ny Strategist Content, dia manazava fa ny singa HTML h1 dia azo ampiasaina ho lohan'ny lehibe, arahin'ny h2, h3, h4, h5, ary h6 lohateny. Ny h1 no sahy; Tokony hosoratana ao amin'ny endri-tsoratra lehibe indrindra izy io, raha ny h6 no loha somary kely indrindra nosoratana tamin'ny endri-tsoratra malaza indrindra. Aza manambany ny tenanao ary aza manahy ny momba ny sori-doha. Tsy safidy izy ireo fa ilaina ary manampy anao hisarihana ny votoatin'ny tranonkala amin'ny fomba tsara kokoa. Tokony hotsaroanao ihany koa fa ireo karazan-dahatsoratra dia manana karazam-pahaizana samihafa ary manampy anao hanome ny votoatinao ho tsara tarehy sy matihanina. Google, Bing, ary Yahoo dia manondro ny votoatiny sy ny tranonkala miaraka amin'ny lohateny mora sy mora. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia azontsika atao ny milaza fa ny lohateny dia ampiasaina betsaka amin'ny fananganana ny tahirin-tranonkala.
Ahoana ny fampiasana ny singa HTML H1-H6 araka ny tokony ho izy?
Ankoatra ny maha-zava-dehibe ny fomba fijerin'ny tranonkala dia manampy anao hanatsara ny laharan'ny tranonkala ny lohatenin'ny lohateny. Ny zavatra voalohany tokony ho fantatrao dia ny tanjon'ny fampiasana ny lohatenin'ny lohateny ary ny antony tokony hizaranao ny lahatsoratrao amin'ny sehatra samihafa. Tsy isalasalana fa manome ny votoatiny amin'ny endri-panandevozana izy, ary ny votoaty dia mahita marobe amin'ny olona marobe. Ny h1 no tag ny lohateny lehibe indrindra ary tokony hampiasaina amin'ny lahatsoratra rehetra amontanao amin'ny tranokalanao.
Zava-dehibe ny mampiasa teny fanalahidy manan-danja eo amin'ny lohatenin'ny lohateny, ary ankoatra anao dia tokony hanome safidy amin'ny teny sy ny fehezanteny mba hanatsarana ny SEO anao. Ataovy azo antoka fa nampidirinao ny teny fototra fototra ao amin'ny lohan'ny h1, ary ny fifantohanao dia tokony hampiasa teny sy teny fototra, teny fototra ary andian-teny ao amin'ny h2 ho tags h6 heading. Tsy ilaina ny mampiasa ny teny fanalahidy fototra amin'ny andaniny rehetra. Ireo fomba fanao ireo dia tsara mba hanatsara ny SEO izay hanampy anao hanatsara ny laharan'ny tranonkalanao amin'ny valin'ny fikarohana Source .